Cydia ho an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Cydia no fivarotana app, mods ary tweaks mifandray amin'ny jailbreak. Ny Cydia mods dia tsy noforonina na nankatoavin'i Apple, satria tsy avelan'i Apple manova ny rafitra raha tsy migadra ianao. Ao amin'ny Cydia no ahitanao izay ilainao rehetra ampanjifaina ny iPhone ary ny rafitra misy azy amin'ny alàlan'ny fanovana tsotra izay afaka maimaimpoana na andoavana. Mametraka amin'ny jailbreak i Cydia na dia eto izahay dia manazava ny fomba azonao atao download Cydia satria io no fomba mora hanovana ny iPhone ho an'izay tsy mahay mandahatra. Cydia dia noforonin'i Saurik.
FastUnlockX dia mahatonga ny iPhone X Face ID hamaha haingana kokoa
Ny fakan-tsarin'ny dian-tànana dia zavatra taloha raha mijery ny fitaratra nomen'ny iPhone antsika isika ...
Apple dia namaha ny olana momba ny famolavolana Apple Park tamin'ny sticker
Apple Park dia tsara tarehy, farafaharatsiny izany no ireo izay nanam-bintana ...
Te hanana ny interface iPhone X amin'ny iPhone misy anao ve ianao? [Jailbreak]
Ny iPhone X dia niavaka tamin'ny zavatra maro, ny efijery farany namboarina noforonin'i Samsung, ny fahaizany, ny fahaizan'ny ...
Lisitr'ireo tweaks mifanaraka amin'ny Electra Jailbreak
Ny Electra Jailbreak mifanaraka amin'ny iOS 11.2 dia nitondra fahafaha-manao tsy manam-petra ho an'ny mpampiasa maro izay efa niandry ...
Fa maninona no tsy mahaliana intsony ny Jailbreak?
Mbola tadidiko ireo fotoana teo anelanelan'ny iPhone 4 sy ny iPhone 6 izay saika nilaina ny Jailbreak ...
Ny trano fitehirizana Cydia roa lehibe dia nakatona rehefa nanjavona ny laza Jailbreak
ny Alvaro Fuentes hace 3 taona .
Nanambara i ModMy androany fa nitahiry ny tahiry ModMyi default ho an'i Cydia, ny App Store hafa hisolo ny fampiharana, lohahevitra, tweak ary rakitra hafa ...
PremiumPlay dia mamela anao mamela ny AirPlay amin'ny rindranasa rehetra
ny Miguel Hernandez hace 4 taona .
Miverina miaraka amina Jailbreak kely isika, aza mieritreritra fa hadinonay ireo tia manao fanazaran-tena mandrap ...